အဒေါ်ဖြစ်သူသေဆုံးမှုအတွက် ဝမ်းနည်းခဲ့ရတဲ့အောင်လအန်ဆန်း - Myanmarload
လွန်ခဲ့သော ၉ လ က 16:05 August 10, 2018
လက်ရှိ နိုင်ငံကိုယ်စားပြုဖိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ One Championship(MMA) ချန်ပီယံကြီးအောင်လအန်ဆန်းကိုတော့အားလုံးချစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ မျိုးချစ်စိတ်အပြည့်ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် မိသားစုအပေါ်လည်း သိတက်တဲ့ သားလိမ္မာတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ လက်ရှိ အမိမြေကို ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီး မိသားစုတွေနဲ့အတူ တွေ့ဆုံလျှက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
မနေ့ညက အောင်လအန်ဆန်းကတော့ အဒေါ်ဖြစ်သူ Ah Moi Jara Lu ရဲ့ သေဆုံးမှုအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း ပြောကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒေါ်ဖြစ်သူရဲ့ စိတ်ကောင်း နှလုံးသားကောင်း ရှိမှုနှင့်အတူ သူ့ဘဝရဲ့ လေးစားရဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
အဒေါ်ဖြစ်သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီးအောင်လကတော့ "Rest In Peace Ah Moi Jara Lu and your love for us is amazing.One of the most selfless being I’ve met in my life. See you on the other side." ဟူ၍ ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ထားသဘောထားကောင်းတဲ့ အဒေါ်နှင့်အတူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးနှင့်အတူ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေဆုတောင်းပေးရင်း မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။